Qoraallada Alicia Navarro ee Martech Zone |
Maqaallada by Alicia Navarro
Alicia Navarro waa agaasime guud iyo aasaasaha Skimlinks, Mashruuc lacag abuuris ah oo ka caawisa degellada in lagu abaalmariyo ujeeddada iibsiga ee lagu abuuray maadooyinkooda Kahor furitaanka Skimlinks, waxay shaqeysay in kabadan 10 sano nashqadeynta iyo bilaabida barnaamijyada moobaylka iyo internetka ee Australia iyo UK. Laga soo bilaabo 2007, Alicia waxay ku kordhisay shirkadda in ka badan shaqaalaha 85 xafiisyada London, San Francisco iyo New York City.
Talaado, Maarso 15, 2016 Alicia Navarro
Ilaa dhowaan, suuqleyda dijitaalka ah iyo xirfadleyda wakaaladda xayeysiiska ah ee raadinayay inay iibsadaan xayeysiinta barnaamijku waxay wajaheen xaalad sanduuqa madow ee xogta. Intooda badani maahan injineerro ama saynisyahanno xog ah, waxayna ahayd inay rumaysad boodaan oo ay aaminaan sheegashooyinka bixiyaha xogta ee ku saabsan tayada xogta, dib u eegista natiijooyinka ka dib hirgelinta - iyo ka dib iibsiga horay loo sameeyay. Laakiin maxaa habboon inay suuqleyda iyo wakaaladuhu ka raadsadaan bixiyaha xogta? Sidee bay ku ogaan karaan kan